Kurdiyiinta oo ku eedeeyay Turkiga inay jabiyeen xabad joojintii lagu heshiiyay - BBC News Somali
Kurdiyiinta oo ku eedeeyay Turkiga inay jabiyeen xabad joojintii lagu heshiiyay
25 Oktoobar 2019
Xoogaga Kurdiyinta ee waqooyi bari Suuriya ayaa ku eedeeyay ciidamada Turkiga in ay jabiyeen xabad joojintii soo afjartay labo toddobaad oo howlgalo ahaa.
Madaxa isbahaysiga xoogaga dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo(SDF)Mazloum Abdi, ayaa sheegay in weeraro ay ka dhaceen aagga hore ee magaalada Ras al-Ain.
Waxa uu ugu baaqay in dhinacyadii damaanad qaaday heshiiska sida Mareykanka iyo Ruushka " ay xakameeyaan Turkiga ".
Dhanka kale wasaaraddda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in dagaalyahanada Kurdiyiinta ay ka baxayeen xudduuda Turkiga.
maxaa ka mid ahaa heshiiskaasi?
Labo toddobaad ka hor dagaallamayaasha xooggaga kurdiyiinta ayaa loo qabtay 150 saacadood iney xadka ka fogaadaan 30 killo mitir laga billaabo caawa.
Marka uu dhammaado wakhtiga loo qabtay iney kurdiyiinta xadka Suuriya iyo Turkiga uga baxaan, ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ayaa ilaalo wada jir ah ka billaabaya bariga iyo galbedka dhulka uu Turkiga dagaalka ka wado.
Mareykanka muxuu Kurdiyiinta u taageerayaa?
Erdogan: Lama aqbali karo farriinta Mareykanka ee difaaca Kurdiyiinta
Warmurtiyeed ay si wadajir ah u soo saareen Ruushka iyo Turkiga ayaa lagu sheegay in xoggaga kurdiyiinta " laga saarayo" Manbeyj iyo magaalada Tal-rifar oo 50 kiilo mitir u jirta kuna beegeen galbeedka dhulka uu Turkigu howlgalka ka wado.
Arbacdina wuxuu wasiirka gaashaan dhigga Ruushka sheegay xukumadda Suuriya iney 15 goobood ay ka sameynyso xadka Turkiga uu la wadaago.
Duulaanka Turkiga ayaa waxaa ka dhashay khasaaro, Qaramada Midoobay waxay sheegtay dad ka badan 176,000 oo ay ka mid yihiin 80,000 oo carruur ah iney labadii toddobaad ee ugu dambeeyey oo keli ah ay ka barakaceen waqooyiga-bari ee dalka Suuriya, iyada oo ay aaggaasi ku nool yihiin dad ka badan 3 milyan oo qof.
Dad ka badan 120 qof oo rayid ahna ay ku dhinteen dagaallada ka dhacayey Waqooyiga Suuriya iyo dagaallamayaasha Kurdiyiinta oo gaaraya 259, 196 ka mid ah maleeshiyada Suuriya ee xulafada la ah Turkiga iyo 7 askari oo ciidamada Turkiga ah
Jaceylkii gaamuuray ee Boqoradda iyo Amiir Philip
Madaxweynayaasha nool ee Mareykanka oo qadarin u muujiyey Amiir Philip
TOOS Madaafiic loo riday xuska Amiir Philip
Nin cajiib ahaa oo noloshiisuna ay cajiib ahayd
Sawirro ku saabsan geerida Amiir Philip